dagaal dhexmaray Canfarta iyo Soomaalida - Radio somit
dagaal dhexmaray Canfarta iyo Soomaalida
Dsgaalka ayaa waxaa uu Galbeedka Gobolka Sitti ee dowlad degaanka soomaalida uu ku dhexnaray Ciidamo iyo maleeshiyaad Soomaali ah iyo maleeshiyaadka Canfarta oo kamid ah qowmiyadaha dega Itoobiya.
Dagaalka ayaa waxaa uu ka dambeeyay kadib markii Ciidamada iyo maleeshiyaadka Canfarta ay weerar ku qaadeen degaanka Cundhufa , halkaas oo ay degan yihiin Soomaalida, waxaana dagaal xoogan oo ka dhacay la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen 8 Ruux 7 kalena ay ku dhaawacmeen.
Dagaalka ayaa waxaa uu ka dhacay Aagag kala duwan, waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in Ciidamada iyo Maleeshiyaadka Canfarta ay dib ugu laabteen halkii ay kasoo weerar tageen kadib markii ay iska caabin kala kulmeen Soomaalida Xoolo dhaqatada ah ee kunool degaanka Cundhufa ee dowlad degaanka Soomaalida.
Dagaalka Soomaalida iyo Canfarta ayaa kusoo laab laabtay dhulka Soomaalida Itoobiya, iyada oo dowladda Itoobiya ay kor ka fiirsaneyso dagaalka, isla markaana aysan weli qaadin tallaabo looga hortagayo ama markii uu dhaco lagu joojinayo.
Previous articleMaxa sababay Mikel Arteta Oo Kashifay Go’aanka Uu Ka Gaadhay William Saliba.
Next articleDalka mareykanka waxa ka dhacay Toogasho arday lagu laayay oo ka dhacday